mota inotonhorera pombi chisimbiso uye mamwe maF-16 akasiyana saizi emvura pombi mechini chisimbiso, China mota inotonhorera pombi chisimbiso uye mamwe F-16 akasiyana saizi emvura pombi mechanical seal Vagadziri, Suppliers, Factory - TAKUMI AUTO PART.
mota kutonhodza pombi chisimbiso uye mamwe maF-16 akasiyana masizi emvura pombi mechina chisimbiso
Automobile 30x12 Shaft Seal YeMvura Pump yekuwachisa zvikamu zvemvura pombi zvisimbiso / mechina zvisimbiso Burgmann Imwe-chitubu Mvura pombi Mechanical chisimbiso E12A12 Inotonhorera Mvura Pump Mechiniki Chisimbiso China gadzira auto mvura pombi mechina chisimbiso C13 C12 track Kutonhora China kugadzira auto mvura pombi mechina chisimbiso Silicon-Carbide HNBR Yezvimotokari Mvura Pombi Seal E12
Yakakwira Standard 168 Peturu Injini Seal YeMotokari FB Seal Shongedzo Mota yeMvura Pump Inotonhora F-12 Yarman
Inokodzera mota zvikamu / jenareta injini
Gadzira Gadzira customizable
Nzvimbo Origin Hunan, China (Mainland)
Nokutengesa Burgmann MG1 rabha bhowani Mechanical Chisimbiso chemvura pombi
1. Sealcon R21 ndeyeBurgmann MG1
2. Zvisimbiso zvedu zvinokwanisa kutsiva zvisimbiso zvekutanga. isu tinoteedzera DIN24960, ISO3069, EN12756, API628 zviyero.
3.Kana isiri iyo yaunoda, iwe unogona kutipfuudza yako pombi modhi kana yako yekudhirowa, zvinhu, shaft saizi yekoteti.
isu tinogona kugadzira chero mechina chisimbiso chaunoda.
4.Customized zvigadzirwa uye OEM inogamuchirwa
5. Isu tinopa Fekitori Mutengo, Yakakwira mhando, Kurumidza Kuendesa uye Yakanyanya Sevice.
Yakakwirira Raw Zvinhu:
Zvese zvinhu zvakasvibirira zvinofanirwa kuchengetwa chete mushure mekuongorora kwakakomba uye inoenderana mushumo wekuongorora.
Yakagadziriswa michina zvisimbiso zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nemasampuli ako kana madhirowa
Strict QC system yekudzora chigadzirwa mhando panguva yese yekugadzira.
Kugara uchiongorora kunoitiswa pane izvo semi-apedza zvigadzirwa muchiitiko chekugadzira kuitira kuve nesainzi yemaitiro edu uye kudzora kwezvakaderera zvigadzirwa.
100% yemhando yekutonga isati yatumirwa
Iyo yehunyanzvi Hunhu Management ndeye chivimbo chekugutsikana kwako kwechitarisiko uye kutaurwa kwezvigadzirwa zvedu.
Kutumirwa kumwe chete nezvinhu zvakasiyana uye maodha
Sub inotumirwa nehurongwa
Brand inovaka rutsigiro
Kuongorora kweMusika uye rutsigiro rwekugadzirisa hurongwa
Kana iwe uchida chero imwe rutsigiro, ingotiudza.
FAQ (Inonyatsobvunzwa Mibvunzo)
Mubvunzo: Uri kutengesa kambani kana fekitari?
A: Isu tiri fekitori, saka tinogona kukupa iwe Fekitori Mutengo nePamusoro Hunhu.
Mubvunzo: Ndeipi fekitori yako iri?
A: Yedu fekitori iri muJiande, Hangzhou iri padyo neShanghai neNingbo Port.
Mubvunzo: Kuendesa kwako kunotora nguva yakareba sei?
A: Kwezvinhu zvemasheya, tinogona kuzvitumira pakarepo mushure mekugamuchira mubhadharo.
Zvezvimwe zvinhu, isu tinoda mazuva gumi nemana nemana nemana nemana ekugadzira kwakawanda zvinoenderana nekuwanda uye mhando dzeodha.
Mubvunzo: Unopa emahara sampuli?
A: Kazhinji isu hatipe yemahara samples .Pari pane yemuenzaniso mutengo iyo inogona kudzoserwa mushure iwe ukaisa odha.
Mubvunzo: Chii chaunowanzo kutumira kuburikidza?
A: Kutakura kwemhepo, kutakura kwegungwa, kuratidza ndiko kutumirwa kwakawanda kunoshandiswa nekuda kwehuremu hudiki uye saizi yeMechanical chisimbiso
Mubvunzo: Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
A: Tinogamuchira T / T, Paypal, Western Union kana zvinhu zvinokodzera zvagadzirira chikepe.
Bhadharawo kuna Alibaba kuburikidza neKiredhiti Kadhi inogamuchirwa.
Pamari iri pasi pe1000USD, 100% pamberi.
Pamari inopfuura 1000USD, 30% pamberi, bhajeti yekubhadhara isati yatumirwa
Mubvunzo: Ini handigone kuwana zvigadzirwa zvedu mune yako catalog, iwe unogona kuita zvigadzirwa zvakagadzirwa kwatiri?
A: Ehe, zvigadzirwa zvakagadzirwa zviripo .OEM inogamuchirwa.
Mubvunzo: Handina dhizaini kana pikicha inowanikwa yezvigadzirwa zvetsika, ungazvigadzira here?
A: Hongu, tinogona kugadzira akanakisa dhizaini zvinoenderana neyako application.